Maamulka Gobolka Banaadir Oo Amar Ku Bixiyay In La Baaro Dadka U Dhinta Coronavirus – Banaadir weyne
Laakiin tallaabadan ayaa su’aalo badan la iska weydiinayaa sida ay suurtagal ku noqoneyso, xilli la ogyahay in dad badan ay magaalada ugu dhintaan xanuunno kala duwan, intooda badanna ay ku geeriyoodaan guryahooda ama meelo ka baxsan isbitaallada.
Iyadoo sharraxeysa amarrada lasoo rogay ayey tiri: “Waxaan dooneynaa in dadka la aasayo aan ka ogaanno xanuunnada ay u geeriyoodeen, si loo hubiyo inay leeyihiin yihiin astaamaha cudurka coronavirus, markaas haddii ay dhacdo inuu qofkaas u dhintay xanuunkaas, waxaan amarradan ugu talagalnay isidii loo xakameyn lahaa inuusan sii faafin cudurkaas”.
Basmo Caamir Axmed, oo ah Gudoomiye kuxigeenka arimaha bulshada ee gobolka Banaadir. ayaa sheegtay in maamulka gobolka uu awood u leeyahay inuu gaaro meel kasta oo ka mid ah gobolka Banaadir, iyadoo beenisay in ay jiraan meelo aysan shaqaalaha caafimaadka u tagi karin sababo amni darro awgood.
Waxay Basmo hoosta ka xarriiqday in amarka kasoo baxay maamulka uusan micnihiisu ahayn “lama aasi karo qof meyd ah”. – Radio Kulmiye